Iyagii bay is moodday !” sheekadii xiisaha badnayd” Qaybtii 2-aad. | ogaden24
Iyagii bay is moodday !” sheekadii xiisaha badnayd” Qaybtii 2-aad.
Dec 15, 2018 - Aragtiyood
Sheekadu waa dhoof iyo isdhiib, guri iyo lacag bilaash ah oo la helayo. Hadal hayntu waa heblaayo iyo heblaayo dhoofay sawirradii quruxda badnaa ee ay soo direen.
Sida xidhiidh loo abuuraa maanta way fududahay. Aaladda internetka ayaa fududaysay isbarashada, wada sheekaysiga iyo is caashaqa dad aan is arag. Waa in si kasta oo lagu dhoofi karo lagu dhoofaa, waa in wax kasta loo huraa.
Xafladihii waxay dhaleen qaab kulan kale. Gurigii heblaayadii dibedda lagaga maqnaa baa wiilashu ku qayilaan. Halkaas baa la isugu yimaaddaa oo habluhuna tagaan baa hadal hayntu noqotay.
Maalintii ugu horraysay ee ay halkaa tagto fajac baa indhuhu soo baxeen. Waxay ahayd inan yar oo damirkeedu nool yahay. Fudayd iyo aqoondarro ayaa wax walba weydaarinayey.
Waa markii ugu horraysay ee ay indhaha ku dhufato dumar iyo rag isdhex fadhiya. Dumar bilaa garbasaar ah, bilaa masar ah. Ragga cid kama garanayso habluhuse waa heblaayo iyo heblaayo ay garanayso.
‘Naa soo fadhiiso, iska dhig shalmaddoo maxaad isla ururinaysaa’ baa la yidhi. Waaba laga dhuftay shalmaddii iyo masarkii. Waa la soo gundhiyey. Way isxejisay. Ugu dambayn meel cidhif ah bay fadhiisatay. Waxay rumaysan wayday indhaheeda. Waa hablo geed cagaaran afka gelinaya.
Halkaasba jabkeedu kama horrayn. Uunsi, cadar iyo udug jaad walba leh ayaa meesha lagu kankamiyey. Marka habeenkii laga sii rawaxayana urta sigaarka iyo daacada qaadka ayaa isku darsama oo meesha qaab darraanteeda dib ha ugu soo noqon baa ku qabanaysa, lagamase maqnaado ee berriba waa la joogaa.
Hebelkii xariifka ahaa ee qurbaha ka yimidna halkaas baa la iskaga lug daray. Heblaayo iyo heblaayadii kale ee ay saaxiibada ahaayeenba waa tii xagaagii hore la dhoofiyey.
Waa tii daawatay sawirradii quruxda badnaa ee ay soo direen. Waa tay u sheegeen inay lacag bilaash ah qaataan. Waan ku dhoofinayaa baa war ay maqasho ay ugu jeclayd. Dhawaaqaas wax walba way u huraysay. Isaguna sidaa wuu u ogaa. Immisuu inan yar sidaa marinka ku seejiyey.
Gabadh qaad cunta aa?.. qayisha, ceeb… Way innaga sasabanayaan, waagii hore ayey odhan jireen habluhu shaaha ma cabbaan. Tii uun bay la mid tahay….waxaaas iyo wax la mid ah baa lagu qanciyey. Waa la walfay oo rag iyo dumar waa la isku milmay, lamana kala xishoodo. Si ay ku soo dhooftayba soo gaadhay galbeedka Yurub. Waa maalintay ugu farxad badnayd dunida.
Maanta meeshu waa Yurub. Xawaaraha ay ku socoto waxay garan kari wayday inta gu’ ee ay Yurub joogtay. Oo ma qaadkii baa Yurubna igaga daba yimid… saaxiibbadii xunxumaa… illayn saaxiibka xumi meelna kaagama hadho haddaad iska reebi waydo… waxay xasuusataa guryihii la fadhiisan jiray… dumar iyo rag isdhex fadhiya oo balwadi isku keentay xaggee lagu arkay adduunka?… la arag..s ow taa la arkay … waxay xasuusataa booskii ay fadhiisan jirtay…
Way qarsataa balwadda. Taaggeeda waxay isleedahay cidi kuma oga, cid walibase way ogtahay. Cidna kama qarsoona, maalin walba waa lagu sheekaystaa, qurux khasaartay baa la yidhaa, immisaa inan rageed oo u hanweynaa dhexda farta ka qaniinay oo quruxdeeda quudhi waayey. Way kala beddeshaa saaxiibbada lab… meel kastoo ay marayso salaantu way ku badan tahay … dadkoo dhan baa wada garanaya … telefoonkeedu ma nasto … guul bay u haysataa mase oga inay guuldarro tii ugu weynayd ku jirto. Haddaad maskaxda isticmaali waydo!!!. Oo miyaanay waalid iyo walaalo lahayn iyo sokeeye kale oo ka naxa.
Walaalaheed way ka naxaan. Araggeeda way ka naxaan….ceeb bay dhulka mari laayihiin. In badan bay kor iyo hoos ula hadleen, dhegse way u dhigi wayday, meeshu waa Yurub oo dheg iyo dhafoor kuma dhufan karaane farahay ka qaadeen.
Badowyahow dib haw celin
Dadka soo baraarugay.
Waxa buuxa wiilal iyo gabdho badan oo dhaqankooda iyo diintooda ilaashada. Sidoo kale way jiraan hablo iyo wiilal badan oo qaldamaa laakiin ka toobbad keen iyo isdaba qabasho ayaa lagu badbaadaa.
Ragga inta baadiyowday tiro ma leh oo cidiba kama naxdo, dumarkase jacayl loo qabo dartii ayaa loogu damqanaya.
Waaba tiiyoo dimuqraadiyad heshay… xor baad tahay, dareenkaaga jinsiga sidaad doonto u gudo, saaxiib yeelo, iska istareex, maxaa kaa galay,..Maya..Maya… iska guurso, carruur dhal,…yaah!!… Nin maxaad uga baahan tahay, carruur maxaad uga baahan tahay, mid iyo laba waad dhali haddaad u baahato…. Waa ceeb,… maxaa ceeb ah? Ma ilbaxnimadaa ceeb ah…meeshii dumarka lagu gumaysanayey. Sheeko…
Xaq baad u leedahay doonistaada, ha ka xishoon, sheego xataa haddaad nin rabto waad ku odhan kartaa waan ku rabaa. Maxaa ku jaban sowka isba kugu yidhaa, miyaan baahidu idinka dhexayn, ma keligii bay gaar u tahay? Berigii hore waxay iska ilaalin jirtay kuwa ay isku dal ka yimaaddeen, maantase cidna kama haybadaysato, waa dimuqraadiyad, xor baa la yahay, maxaa dadka iskugu yaal. Nafta waa in la raalli geliyo, waxay rabto in loo diido maaha…
Maxay ka faa’iiday baabuurtii quruxda badnayd ee kolba mid lagu qaadayey, habeen dhaxii iyo dhafarkii,… may ogayn in shilinka lagu sabayo oo wiil rag waxa ay ka helayso, waxa ay ku waayaysaa ka badan yahay. Macaan-jeceshii sunta leeftay bay noqotay. Mar walba ta khasaaraysaa iyaday ahayd.
Saacaddu way isgaraacaysaa, waa saq dhexe, 24kii (zero hour), guyaashu way is tareen, afartan gu’ bay baarka jartay. Waa afartan jir aan is ogayn.
Qorraxdii xagaaga ee kululayd bay indhaha ku kala qaadday. Xusuustii dib uga soo noqotay. Indhaha illintu way ku qallashay oo waxba ka soo daadan waa. Xagaayadii hore way sii qorshayn jirtay halka ay dalxiis u tegayso, hebellada ay israacayaanna waa la sii ogaa. Xagaagan meelna uma socoto, malaha iyada ayaaba loo soo xagaa tegayaa. Yaa u soo xagaa tegaya? ma bahal dugaag? yaa dan ka leh.
Cod bay maqlaysaa, waa cod dheer oo dhegaha kaga qaylinaya:
Iil dhexdiisa maaha
Dheg xumaanta weeyaan
Waaba gabay, oo waa Hadraawiye…isna xagguu uga yimid? yaa u soo diray? Maxaa ka galay dhimashadeeda, siduu ku ogaaday?